Topy Maso Eran-tany | Mifohaza! Aogositra 2014
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
“Efa ho telo tapitrisa isan-taona ny zazakely maty nefa tsy ampy iray volana akory. Azo sorohina ny ankamaroan’ny antony nahafaty azy ireo. Maherin’ny ampahatelon’ireo zaza vao teraka ireo no tsy ampy iray andro akory dia maty.”—Fikambanana Iraisam-pirenena Mpiaro ny Ankizy.
Milaza ny Minisiteran’ny Fahasalamana fa tamin’ny 2011 dia nitombo ny isan’ny olona maty vokatry ny rivotra maloto, tao amin’ny faritra 15 any Londres. Noheverina hoe tsy mandoto ny tontolo iainana ny fiara mandeha gazoalina, satria mitsitsy kokoa sady kely ny gazy karbonika avoakany. Hita anefa fa avy amin’ny gazoalina ny 91 isan-jaton’ny zavatra simika mandoto ny rivotra any amin’ireo faritra ireo.
Nisy fanadihadiana natao tamin’ny 2013, ka ny 52 isan-jaton’ny Kristianina ortodoksa no nilaza fa mbola tsy namaky Baiboly mihitsy, ary ny 28 isan-jato no zara raha mivavaka.
Milaza ny Banky Iraisam-pirenena fa mampihena ny vokatra azo avy amin’ny fambolena ny ady tany, sady mampahantra ny olona. Mahatratra 202 tapitrisa hektara eo ho eo, ohatra, ny tany tsy misy mpamboly atsy Afrika. Antsasaky ny tany azo volena nefa tsy misy mikarakara izany, eran-tany. Mbola tokony hamokatra avo efatra heny noho izany anefa ny tany any.
Sekoly sy oniversite maro no tsy mampiasa boky intsony, fa aleony mampiasa fitaovana elektronika toy ny tablette, izay azo asiana programa sy zavatra hafa ilaina amin’ny taranja isan-karazany. Asa anefa aloha raha mandany vola kokoa izany.
Topy Maso Eran-tany—Aogositra 2014